Soomaalida waxay tiraahdaa: Madi iyo Macallim baa maan yar! Marti dhadaystay baa maan yar! Maqaam (meekhaan) lafo ruugay baa maan yar! - Hablaha Media Network
Soomaalida waxay tiraahdaa: Madi iyo Macallim baa maan yar! Marti dhadaystay baa maan yar! Maqaam (meekhaan) lafo ruugay baa maan yar!
HMN:- Soomaalida waxay tiraahdaa: Madi iyo Macallim baa maan yar!
Marti dhadaystay baa maan yar! Maqaam (meekhaan) lafo ruugay baa maan yar! Aan idin jilciyo
MADI waa wiilka gabdho keliya la dhasheen. Aad ayaa loo koolkooliyaa xitaa markuu waynaado oo hana qaado. Kolkaasuu marka uu bulashada soo dhex galo ee si caadi ah loola dhaqmo xamili kari waayaa oo dhaqan doqonnimo la soo baxaa illayn koolkoolintii qoyska ayuu qabatimay.
MACALLIM wuxuu la mid yahay madiga ah waayo dadku si wayn ayay u ixtiraamaan lagamana hor yimaad qaladkiisa iyo saxdiisuba na waa wada sax. Ha yeeshee marka uu la kulmo dad aan aqoon shakhsi ah u lahayn oon la socon inuu macallimkii muxtaramka ahaa yahay ee la yiraahdo "Oday waa ku side!" ayuu xamili waayaa.
MARTI dhadaystay waa ninka isagoo safar ah reer u soo martiya ee gogol loo dhigo lana sooro ha yeeshee marki ay reerki seexdeen -xishood-darridiisa- gabadhii qoyska u joogtay haasaawo ugu tegay.
MAQAAM ama MEEKHAAN waa qofka hoggaanka ah bulshadu maamuusto sida madaxda, duubaabka kd. Ka warran ninkii sidaa ahaa ee la darajeeyay loona loogay haddii la arko kiiyoo laf uu hilibkii ka feentay gowsaha ku hiigaya oo jajabsanaya!? Waa maqaab
Madi iyo Macallim baa maan yar!
Marti dhadaystay baa maan yar!
Maqaam lafo ruugay baa maan yar!
waxaa qoray : Muxumad Indhageelle